New patent Apple patent, OS X 10.11.5, ụlọ ahịa ọhụrụ na India, ụbọchị nnweta na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
New Apple keyboard patent, OS X 10.11.5, ụlọ ahịa ọhụrụ na India, Accessibility Day na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Otu izu ọzọ anyị ewetara gị nchịkọta nke isiokwu ndị anyị bipụtara n'oge izu na blọọgụ m sitere na Mac na ọ nwere ike ị gaghị enwe ike ịgụ. Izu na-aga na Apple Worldwide Developers Conference na-abịarukwu nso na ọ bụ ya mere anyị kwesịrị iji asịrị metụtara Mac na ụwa nke gbara ya gburugburu.
Izu a anyị ahụlarị asịrị na nkwupụta nke ihe ga-abụ sistemụ OS X ọhụrụ na mbata Siri na ya, mana rue June yana WWDC 2016 anyị enweghị ike ikwenye ma ọ bụ were obere ihe ọ bụla.
Anyị malitere mkpokọta na isiokwu na-ekwu banyere patent gbara akwụkwọ na a haptic kiiboodu na Apple kọmputa. Ọzọkwa, a na-etinye ụlọ ọrụ Tim Cook na-ebute ụzọ na nkà na ụzụ ọhụrụ mgbe ọrụ nyocha na mmepe dị mkpa. Apple na-ebute ụzọ n'ihe ọhụrụ, Apple natara na Eprel 7 nkwenye nke Office Patent nke oru ngo a: akwukwo kiiboodu na-enweghị igodo maka kọmputa.Ugbu a, anyị maara nkọwa nke teknụzụ nke mejupụtara keyboard a maka laptọọpụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-atụ anya Apple Pay na-abịa na obodo anyị yana ya Apple Wallet ị ga-enwe mmasị na akụkọ anyị na-ekwu okwu na ọ nwere ike ịbụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala UK nwere ike tinye ikikere ugbo ala na Apple Wallet. Ekwentị anyị bụ windo maka ọtụtụ ihe dị iche iche karịa ihe anyị na-eme, dị ka tiketi ụgbọ elu, kaadị akwụmụgwọ, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.Ọ dịkwa ka ọ dị na UK na-atụle ihe ga-eme ma ọ dịkarịa ala ịhapụ ikikere ịnya ụgbọala na ekwentị ha.
Izu a Apple emeela ka ndị ọrụ nweta ụdị ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ OS X El Capitan 10.11.5, nke ị nwere ike ibudata na Mac App Store, mgbe anọ betas nke ya. Ọ bụghị naanị mmelite ka ewepụtara na bụ na Apple Watch na Apple TV adịworị dị ka mma. Dị ka ị maara, Apple nọ na-ahapụ betas maka ụdị ọhụrụ nke OS X maka izu ole na ole ma ọ dị ka taa abụrụ ụbọchị ahọpụtara maka ụdị nke ikpeazụ iji ruo kọmputa anyị.
Tupu eto ngwa ngwa na-eme atụmatụ na ahịa, Apple chere ihu a enwere ike ịda mgbe akụkọ banyere itinye ego gị ha anaghị akwụsị ịkpali mmasị na obi abụọ nke ndị ọrụ. Mgbe ọnwa ole na ole ebe ọ bụ na Mbelata nke òkè nke David einhorn na ụlọ ọrụ, na ụbọchị ole na ole mgbe Carl Icahn, otu n'ime ndị ọrụ ntinye ego kachasị ukwuu nke Apple, rere ahịa ya niile, David tepper - onye ọzọ nke ukwuu maka Apple- agbasoro nzọụkwụ na-awụfu ya 133 nde dollar na mbak.
Izu a anyị enweela ike ịmụtakwu banyere ihe Apple chọrọ na ahịa India na obere oge ma amaara na ha na-eme atụmatụ imeghe ihe ọ bụla na ihe na-erughị atọ Applelọ Ahịa Apple ọhụrụ ke ikpọ obio India. N'ụzọ dị otú a, ndị bi na mba a nwere ike ịnweta ngwaahịa nke apụl apụl na nke a iji nwee ike ịbawanye ahịa na ahịa nke ugbu a dị ka ma ọ bụ karịa na-apụta karịa ndị China.
Anyị kwụsịrị mkpokọta ahụ na akụkọ banyere okwu banyere Renessbọchị Nweta Ọzụzụ Globalwa. Nke a bụ emume Daybọchị ofwa nke Ọmụma nke nnweta Weebụ. Teknụzụ na-aga n'ihu yana ya na andntanetị na ọtụtụ mmadụ ndị na-eji ngwa abụọ ahụ nwere nsogbu nnweta na n'ihi nke a ọ dị mkpa ka webata na okwu nke okwu ndị a.
Ọfọn, ruo ugbu a ozi anakọtara taa. Anyị na-agba gị ume ka ị danye na blọọgụ anyị ma hụ ndị niile anyị etinyeghị na mkpokọta a, ọkachasị nke ngwa ndị nweere onwe ha maka obere oge ma ọ bụ nke wedata ọnụahịa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » New Apple keyboard patent, OS X 10.11.5, ụlọ ahịa ọhụrụ na India, Accessibility Day na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Apple na-ezube igbasa Apple Store na Fifth Avenue
Infuse webatara ele Ọbá akwụkwọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ